ZFS paLinux: Linus Torvalds Anoti Nguva Yake Haina Kuuya | Linux Vakapindwa muropa
Kunyange i ZFS paLinux Izvo hazvizove zvitsva muna 2020, yanga iri nhau kwemwedzi. Chikamu chemhosho ndeyeCanonical, kambani inovandudza imwe yemapaipi anozivikanwa, kuwedzera kutanga kutsigira paUbuntu 19.10 uye vimbisa kutsigira kwakazara paUbuntu 20.04. Pakutanga zvese zvaiseka ... kudzamara Linus Torvalds, munhu mukuru anotarisira Linux kernel, akasimuka kuti ataure, chaizvo,Usashandise ZFS (paLinux). Zviri nyore kudaro ".
Nyaya yacho ichangobva kuitika. Muvhuro wapfuura, mushandisi akanyunyuta kuti ZFS paLinux yakakwenya mashandiro ake Iyo mhinduro de Torvalds haana kumirira, achivimbisa kuti iyo kosi haina mutoro pane zvakaitika kwaari. Chaizvoizvo, anokonzeresa ndiyo systemystem, imwe iyo vanogadzira kernel vasingakwanise kuisa maoko avo pamusoro uye inosanganisira rutsigiro rwese rwavanoda nekuti ndizvo muridzi weOracle.
1 Tsamba kubva kuLinus Torvalds pane nei usingashandisi ZFS paLinux
2 Dambudziko nderei
Tsamba kubva kuLinus Torvalds pane nei usingashandisi ZFS paLinux
Ziva kuti "isu hatiparadzanise vashandisi" iri chaizvo nezve mushandisi nzvimbo nzvimbo uye musimboti wandinochengeta. Kana mumwe munhu akawedzera kernel module seZFS, ivo vari vega. Ini handikwanise kuichengeta, uye handigone kusungwa nedzimwe shanduko dzenzara. Uye nokutendeseka, hapana nzira yekubatanidza chero yekuedza kweZFS kudzamara wagamuchira tsamba yepamutemo kubva kuOracle yakasainwa nemukuru wezvemitemo kana zviri nani Larry Ellison iye achiti hongu, zvakanaka kuti uite uye ubate mhedzisiro seGPL'd.
Vamwe vanhu vanofunga kuti zvingave zvakanaka kubatanidza iyo ZFS kodhi mune kernel uye kuti module module inozviita zvakanaka, uye ndicho chisarudzo chavo. Asi tichifunga nezvehunhu hunokatyamadza hweOracle nemibvunzo yekupa marezenisi, hapana imwe nzira yandinonzwa ndakachengeteka kuzviita. Uye iniwo handifarire mhando ye "ZFS wedge layer" iyo vamwe vanhu vanoita sevanofunga kuti yaizopatsanura mapurojekiti maviri aya. Izvo hazviwedzere chero kukosha kudivi redu, uye kupihwa Oracle's interface copyright kodhi (ona Java), handifunge kuti iri rezinesi chairo kuwana kana.
Usashandise ZFS. Zviri nyore kudaro. Yaigara iri yakawanda yezwi kupfuura chero chinhu chipi zvacho chandinofunga, uye izvo zvinopa marezinesi zvinongoita kuti zvisave kutanga kwandiri.
Zviratidzo zvandakaona hazviite kuti ZFS iratidzike zvakanaka. Uye sekugona kwangu kutaura, haisisina chero chengetedzo chaiyo, saka kubva kune yakareba-nguva kugadzikana nzvimbo yekutarisa, nei iwe ungazoda kuishandisa pakutanga?
Zvinetso izvo Torvalds anoona neZFS muLinux zvinonyanya kuve zviviri:
Iwe hausi kuzoshanda nayo kudzamara Larry Ellison akupa mvumo yakanyorwa yekuibata seGPL. Pasina kushanda nayo, ZFS paLinux haisi zviri pamutemo akatsigira.
Kuita kwacho hakusi kwakanyanya kunaka kwaungave.
Mushure mekuverenga tsamba iyi, uchave uri kushandisa ZFS paLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ungashandisa ZFS paLinux kana Linus Torvalds ikakuudza iri zano rakaipa?
Linus ndizvozvo. Vanhu vashoma kwazvo vanogona kuwana ZFS inobatsira; zvaizoita zero mutsauko kune huwandu hwevashandisi. Saka kuzviisa mukernel uye kupinda muhondo yepamutemo neOracle hazvina musoro. Asi zvaive zvakare zvakanaka kwazvo kukuudza kuti kana iwe usina chikonzero chakasarudzika chekusarudza, uri kutambisa nguva yako.
Ndiyo nyaya yekare cdo yavanoda "kukutengesera" system yefaira, vanogara vachiuya neiyo "performance" vhesi. Uye chokwadi ndechekuti hapana munhu akanaka pane zvese. Ivo vese vakanaka pachinhu chimwe uye lousy pane chimwe chinhu.
Pane imwe nguva ini ndaive ne "hype" yekufananidza masystem efaira, ndichitsvaga zvakanakisa: mukuita, chengetedzo uye maficha. Ini ndanga ndichifunda mabhenji ePhoronix. Pakupera? Mushure mekutendeuka chiuru, ndakazopedzisira ndiine chinhu chimwe chete chandaive nacho pakutanga: ext2 / 4 uye btrfs.
Sisitimu yako haisi kuzo "bhururuka" nekuisa imwe faira system. Uye kune vazhinji vashandisi, vangangoita chero FS ichavaitira basa (ext4 x default).
Muchidimbu, kunyangwe iwe uchinzwisisa zvauri kuita kana kuti kwete, iyo systemystem iwe yaunoshandisa ichagara iri yakanyanya kana shoma "yega" sarudzo (Linus kana kwete LInus :-)
Ubuntu 19.04 Disco Dingo inosvika kumagumo ekutenderera kwayo muna Ndira 23